Argagixiso qaarkood Soomaali ah oo la qabtay ayaa dhagaheyga ku badatay
Madaxweyne Obaama ayaa ka dhawaajiyay inay soo badanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee lala xariirinayo Argagixisinimada ee doonaya inay qal qal geliyaan guud ahaan amaanka dalka Mareynkanka.
(more…) read more... Hague iyo Fowzia Yusuf oo London ku Kulmay
Riix http://www.voasomali.com/audio/audio/245361.html Wareysi arrintaas ku saabsan hoosta ka dhagesyo.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Britain, Hague iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somalia, Fowzia Yuusuf X. Aadam ayaa ka wada hadlay furidda safaaradaha iyo kulan London ka dhici doona. Kulankan oo taageerada Somalia ku saabsan ayaa la sheegay in lagu wadaa inuu magaaladaas ka dhaco bisha May ee sanadkan. read more... Madaxweynaha Somalia iyo Wafdigii uu Hoggaaminayay ee ku sugnaa Dalka Kenya oo saakay u dhoofay Uganda
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh iyo wafdigii uu hoggaaminayay oo maalmahaan ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa saakay aroortii hore u dhoofay dalka Uganda, halkaasoo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni.
Safarka madaxweynaha ayaa waxaa ku wehliya xubno wasiirro ah oo ay ka mid yihiin: ra’iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda, Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan, wasiirka wafaafinta iyo isgaarsiinta, C/llaahi Ciilmooge Xirsi iyo xubno kale.
(more…) read more... « Prev123..............16511652165316541655 Special Info